January 5, 2021 - ApannPyay Media
အုန်းလွဲ၊ နောက်ကျောတက်တတ်သူများအတွက် သတင်းကောင်းလေး မျှဝေပါသည်
February 2, 2021 January 5, 2021 by ApannPyay Media
အုန်းလွဲ၊ နောက်ကျောတက်နေလျှင် နောက်ကျောတက် ဇက်ကြောတက် လက်ပြင်ငုတ် အုံးလွဲနေသူများ အတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်တဲ့ နည်းလေးပါ။ အဆင့် (၁) ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား လက်နှစ်ဖက်ကို နဖူးပေါ်တင် ခေါင်းကို နောက်လှန်နိုင်သလောက် လှန်ဖိထားပါ။ ခါးမပါသွားပါစေနဲ့။ ၁၀ စက္ကန့်ရေပြီး ပြည့်ရင် ဖြည်းဖြည်း လွှတ်ပါ။ အဆင့် (၂) ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်စေ့မှာကပ်ပြီး ခေါင်းကို ရှေ့ဖိနိုင်သလောက် ဖိပါ။ ခါးကုန်းမသွားပါစေနဲ့။ ၁၀ စက္ကန့်ရေပြီး ပြည့်ရင် ဖြည်းဖြည်း လွှတ်ပါ။ အဆင့်် (၃) ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား ဘယ်ဘက်လက်ကို ခါးထောက်ထားပြီး ညာဘက်လက်က ဦးခေါင်းကို အပေါ်ကနေ ညာဘက်ပါနိုင်သလောက် ဆွဲဖိထားပါ။ ခါးမပါစေနဲ့။ … Read more
ခေါင်းမူး ၊ ခေါင်းကိုက် ၊ခေါင်းမကြည်ခြင်းအတွက် စပါးလင် ရေနွေးကြမ်း
January 5, 2021 by ApannPyay Media
ခေါင်းမူး ၊ ခေါင်းကိုက် ၊ခေါင်းမကြည်ခြင်းအတွက် စပါးလင် ရေနွေးကြမ်း ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်ခေါင်းမကြည်ခြင်းအတွက် “ဆေးဖက်ဝင် စပါးလင် ရေနွေးကြမ်း” ဟင်းချက်ရာမှာထဲ့သုံးဖို့ စပါးလင်ကိုစျေးကဝယ်လာပြီးသောအခါအပေါ်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီး လွှင့်ပြစ်လိုက်တတ်ကြတာအများစုပါ ။ နောက်ဆို မလွှတ်ပြစ်ပဲ ဒီလိုလေးစမ်းကြည့်ပါ ။ ဖြတ်ထားတဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုရေသေချာဆေးခေါက်တုတ်လေးစုပြီးချည်လိုက်ပါ ။ ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူတစ်အိုးထဲပုံမှန်အတိုင်းလက်ဖက်ခြောက်ခပ်ပြီးရင်ချည်ထားတဲ့ စပါးလင်ကိုထည့်ပါ။ ရေနွေးတစ်အိုးဆိုရင်စပါးလင်တစ်ချောင်းဆိုလုံလောက်တယ် ဒီထက်ပိုထဲ့တာကိုကြိုက်လဲ ပိုထည့်ပေါ့ ။ လက်ဖက်ခြောက်ကျပြီဆိုရင် ရေနွေးပူပူလေးကိုမှုတ်ပြီးသောက် စပါးလင်နံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ခံတွင်းလဲ ရှင်းတယ် ။ တော်ယုံခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်စိတ်မကြည်လင်တာတွေလဲ ပျောက်တယ် ။ ကျွန်တော်တော့ သိပ်ကြိုက်တယ်မကြာခဏလုပ်သောက်ဖြစ်တယ် ။ အဲ့လိုပဲ စပါးလင်နေရာမှာကွမ်းရွက်တွေ ကွမ်းရိုးတွေကိုသေချာရေဆေးပြီး ခပ်သောက်ကြည့်အဲ့ဒါလေးလဲ တစ်မျိုးသောက်ကောင်းတယ် ။ အားလုံးပဲ ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေသင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာများအားလုံး အားလုံးအား လေးစားလျှက်ပါ ။ ။ မောင်ဇေ Sai Min … Read more
DENKO ဆီဆိုင် ကံစမ်းမဲမှ ကားသစ်ကြီးပေါက်သွားတဲ့ ဆရာတော်
DENKO ဆီဆိုင် ကံစမ်းမဲမှ ကားသစ်ကြီးပေါက်သွားတဲ့ ဆရာတော် DENKO ဆီဆိုင် ကံစမ်းမဲမှ Nissan Sunny. ကားသစ်ကြီးပေါက်ပြီး ဝမ်းသာမိ သီပေါမြို့နယ် ဘော်ကြိုကျောင်းတိုက်မှ ဦးဇင်းတစ်ပါး Denko ဆီဆိုင်ကားကံစမ်းမဲပေါက် သီပေါ ဇန်နဝါရီ ၅ သီပေါမြို့နယ် ဘော်ကြိုကျေးရွာ ဘော်ကြိုကျောင်းတိုက်မှ ဦးဇင်း ဦးဥတ္တမ DENKO ဆီဆိုင် ကံစမ်းမဲမှ လက်မှတ်(၆)စောင်ထိုးပြီး Nissan Sunny. ကားသစ်တစ်စီးဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ် Photo – Khun Zai Axsai(HHN/LHN) M_T_A. Myat Tun DENKO ဆီဆိုင္ ကံစမ္းမဲမွ ကားသစ္ႀကီးေပါက္သြားတဲ့ ဆရာေတာ္ DENKO ဆီဆိုင္ ကံစမ္းမဲမွ Nissan Sunny. ကားသစ္ႀကီးေပါက္ၿပီး ဝမ္းသာမိ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ေဘာ္ႀကိဳေက်ာင္းတိုက္မွ ဦးဇင္းတစ္ပါး … Read more
ဝမ်းကိုက်၊ သွေးဝမ်း၊ မီးယပ်ဝမ်းနဲ့ အသည်းအဆီဖုံးသူများ မပူနဲ့ မရမ်းသီးလာပါပြီ
ဝမ်းကိုက်၊ သွေးဝမ်း၊ မီးယပ်ဝမ်းနဲ့ အသည်းအဆီဖုံးသူများ မပူနဲ့ မရမ်းသီးလာပါပြီ မရမ်းသီး စားပေးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်တဲ့ ကျန်း မာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော်… မရမ်းသီးသည် သွေးဝမ်း သွားခြင်း၊ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊သွေးကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါ၊ အဖျား ဟောင်းနှင့်ကိုယ်တွင်းပူ လောင်ခြင်း၊ အသားကြား အရိုးကြား တို့၌ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကို သက်သာ ပျောက်ကင်း စေသည်။ မရမ်းသီးကို သုပ်စားခြင်း၊ ချက်စားခြင်း၊ စသည်ဖြင့် ပြုလုပ် စားသုံးပါက ခံတွင်း ပျက်ခြင်းနှင့် ခံ တွင်း အရသာမပေါ်ခြင်းတို့ကို သက်သာ ပျောက်ကင်း စေနိုင် သည်။ ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ မီးယပ်ဝမ်းသွားခြင်းများ အတွက် မရမ်းသီး ဆား ရည်စိမ် အရည် သောက်ပေးခြင်း၊ ဆားရည်စိမ်မရမ်းသီးကို သုပ်စား ပေးခြင်းဖြင့် … Read more
သကြားသီးပင် ဒီလောက်စွမ်းမှန်းမသိခဲ့ဘူး ဂေါက်ရောဂါ၊ အကျိတ်၊အစာအိမ်အနာ၊နှလုံးတို့ ကို ကောင်းမွန်စေသည်ဆိုသော … သကြားသီးပင်. သကြားသီးပင်် ဒီသကြားသီးဆိိုတာက ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းချနေတဲ့ သကြားသီးမဟုတ်ပါဘူး။ အလေ့ကျပေါက်ပင်လိုမျိုးတွေ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ အသီးနီနီလေးတွေသီးတဲ့ သကြားပင်ရဲ့ အသီးနီနီလေးတွေကို ဆိုလိုချင်တာပါ။ အသီးလေးတွေက သီးစမှာ အစိမ်းရောင်ဆိုပေမယ့် မှည့်လာတဲ့အခါ အနီရောင် လေးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ အခွံကခပ်ပျော့ပျော့ရှိပြီး တစ်လုံးလုံးကို စားလို့ရပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက် ဒီအသီးလေးတွေက ဘယ်လိုဆေးဖက်ဝင်လဲ ဆိုတာကိုပြောပြပေးပါရစေ။ ဒီအပင်က ဖိလစ်ပိုင်နဲ့မက္ကဆီကို မျိုးရင်းပင်တွေပါ။ သကြားသီးနီနီလေးကပေးတဲဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တယ်် သကြားသီးက ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိို ပြင်ပကဘက်တီးရီးယားတွေမဝင်ရောက်နိုင်အောင် တိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်။ သကြားသီးမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိနေတာကြောင့် ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ် တဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေတယ်် သကြားသီးက ခန္ဓာကိုယ်အစိိတ်အပိုင်းတွေ ရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ပါးသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝအရောင်ကျဆေးတစ်မျိုးလို့လည်းဆိုလို့ရပါတယ်။ … Read more
အဆုပ်မှာအနာရှိသူတစ်ဦး လက်တွေ့ပျောက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည့် ဆေးကင်းခြေ
အဆုပ်မှာအနာရှိသူတစ်ဦး လက်တွေ့ပျောက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည့် ဆေးကင်းခြေ ဆေးကင်း ခြေ လွန်ခဲ့သော(10)နှစ်ခန့်ကမိတ်ဆွေတစ်ဦးအသက်ရှုမဝလို့ဆေးခန်းသွားပြတာ(အဆုပ်မှာ)အနာရှိတယ်ပြောလိုက်လို့ဖေါ်ပြပါအပင်ရဲ့အရွက်(3)ရွက်ကိုခူးပြီးရေနွေးဖြောကာနေ့စဉ်ဝါးစားတယ်။ (15)ရက်ခန့်ကြာတော့မျက်နှာကအမဲစက်တွေ စပျောက်လာတယ်အသက်ရှူလို့လဲကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ် (1)လကျော်ကျော်လောက်မှာတော့ဆေးပြန်စစ်တာအနာမတွေ့ကြောင်းပြောပြတယ်ယနေ့တိုင်သက်ရှိထင်ရှားရှိနေဆဲပါ အမှန်တကယ်ဒီအပင်ရဲ့အစွမ်းအထောက်အပံ့ဖြစ်မဖြစ်ကို-ဝါသနာရှင်များ-ပညာရှင်များ-သုတေသီများလေ့လာဖေါ်ထုတ်နိုင်ပါစေရန်ရည်သန်လျှက်တင်ပြလိုက်ပါတယ် ဆရာကြိုင် အဆုပ္မွာအနာရွိသူတစ္ဦး လက္ေတြ႕ေပ်ာက္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည့္ ေဆးကင္းေျခ ေဆးကင္း ေျခ လြန္ခဲ့ေသာ(10)ႏွစ္ခန႔္ကမိတ္ေဆြတစ္ဦးအသက္ရႈမဝလို႔ေဆးခန္းသြားျပတာ(အဆုပ္မွာ)အနာရွိတယ္ေျပာလိုက္လို႔ေဖၚျပပါအပင္ရဲ့အရြက္(3)ရြက္ကိုခူးၿပီးေရေႏြးေျဖာကာေန႔စဥ္ဝါးစားတယ္။ (15)ရက္ခန႔္ၾကာေတာ့မ်က္ႏွာကအမဲစက္ေတြ စေပ်ာက္လာတယ္အသက္ရႉလို႔လဲေကာင္းတယ္လို႔ေျပာပါတယ္ (1)လေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာေတာ့ေဆးျပန္စစ္တာအနာမေတြ႕ေၾကာင္းေျပာျပတယ္ယေန႔တိုင္သက္ရွိထင္ရွားရွိေနဆဲပါ အမွန္တကယ္ဒီအပင္ရဲ့အစြမ္းအေထာက္အပံ့ျဖစ္မျဖစ္ကို-ဝါသနာရွင္မ်ား-ပညာရွင္မ်ား-သုေတသီမ်ားေလ့လာေဖၚထုတ္နိုင္ပါေစရန္ရည္သန္လၽွက္တင္ျပလိုက္ပါတယ္ ဆရာႀကိဳင္
ဒီသဘာဝနည်းလမ်းလေးသုံးကတည်းက ဆံပင်မကျွတ်တော့လို့ အတော်ကိုစိတ်ချမ်းသာသွားတာ
ဒီသဘာဝနည်းလမ်းလေးသုံးကတည်းက ဆံပင်မကျွတ်တော့လို့ အတော်ကိုစိတ်ချမ်းသာသွားတာ ဒီ သဘာဝ နည်း လမ်း လေးက ဆံပင် လုံးဝ မကျွတ်တော့ပါဘူး ရှင် (တော်တော်ကိုစိတ်ချမ်းသာသွားတာ) ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက 🇦ရှားဇောင်းလက်ပတ် အတွင်းသား သံ လွင်ဆီ ထောလပတ်ရွက် ရှားဇောင်းလက်ပတ် အတွင်းသားကို ခြစ်ယူ ပြီး သံလွင်ဆီနဲ့ ရော မကျို ုခင်မှာ အဖက်တွေကို ကြေအောင်ခေါက်ပါတယ် ပြီးမှ သံ လွင်ဆီနဲ့ ရော ကျို အအေးခဏ ခံထား နေပူလှန်းထားတဲ့ ထောလပက် အရွက်တွေကို ငြုပ်ဆုံ သန့်သန့်မှာ အမှုန့်ရတဲ့ အထိ ထောင်း ဗူးအလွတ်ထဲ ခုန အအေးခံထားတဲ့ သံလွင်ဆီကို အရင်ထည့် ပြီးမှ ထောလပက်ရွက်အမှုန့် ထည့် ခေါင်းလျော်မယ့်နေ့ အိပ်ယာက … Read more
မျက်နှာပဲဖြူပြီး လည်ပင်းကြီးမည်းနေလို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေရင်
မျက်နှာပဲဖြူပြီး လည်ပင်းကြီးမည်းနေလို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေရင် မျက်နှာကိုပဲ ဂရုစိုက်ရင်း ငွေတွေ အများအပြား အသုံးပြုကြပေမယ့် လည်ပင်းကို ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့လျှော့နေတတ်ကြပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းရင်တောင် လည်ပင်းကိုလိမ်းပေးဖို့ မေ့တတ်ကြသူတွေရှိပါတယ်။ ဒီတော့ မျက်နှာပဲဖြူပြီး လည်ပင်းကြီးမည်းနေရင်လည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ လည်တိုင်ဖြူဖြူလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ သဘာဝနည်းလမ်းကို အသုံးပြုရအောင်ပါ။ ပြုလုပ်နည်း ၁ မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း အုန်းဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း ပြုလုပ်နည်း ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုရောပြီး လည်ပင်ပေါ်မှာ ပွတ်လိမ်းပေးရမှာပါ။ ပြီးရင် ၁၀ မိနစ်လောက်ထားပြီး ရေနွေးနဲ့ ဆေးချပါ။ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မှာဖြစ်လို့ အသားအရေ ဖြူဝင်းစိုပြေလာမှာပါ။ နည်း ၂ ပါဝင်ပစ္စည်း စန္ဒကူး နံ့သာမှုန့် (သို့) ရွှံ့စေးမှုန့် … Read more
Laptop Battery အားမခံတော့လို့ အသစ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတော့သိထားပါ
Laptop Battery အားမခံတော့လို့ အသစ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတော့သိထားပါ ကျွန်တော်တို့က Laptop External Battery (အလွယ်တကူ ဖြုတ်လို့ရသော battery) အားမခံတော့လို့ အသစ်လဲတော့မယ်ဆိုရင် OEM Battery နဲ့ Original နှစ်မျိုးရှိတယ် OEM က ဈေးသက်သာပြီး Original က ဈေးနည်းနည်းပိုမယ်။ Battery က4Cells နဲ့6Cells ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိသေးတယ်။ Gaming Laptop တွေမှာ9cells နဲ့ 12 Cell ထိ လာတတ်ပါတယ်။ Battery4Cells က ခန့်မှန်း‌ခြေ နှစ်နာရီ ကနေ နှစ်နာရီလေးဆယ်ငါးမိနစ်လောက် အသုံးခံတယ်။ (အသုံးပြုတဲ့ Software … Read more
ဒူးရင်း ဩဇာ၏ ဆေးဖက်ဝင်စွမ်းရည်
ဒူးရင်း ဩဇာ၏ ဆေးဖက်ဝင်စွမ်းရည် ဒူးရင်း ဩဇာ ဆေးဖက်ဝင်အာနိသင်ရှိသော ဒူးရင်းဩဇာဒူးရင်းဩဇာကို မရင့်မှည့်မီခူးဆွတ်ရပါသည်။ ရင့်မှည့်ရင် သူ့အလိုလို အောက်သို့ ပြုတ်ကျသွားပါက အသီးသည် အညိုအမဲစွဲသွားပြီး မကောင်းတော့ပါ။ ဒူရင်းဩဇာသည် အရသာရှိသောအသီးဖြစ်သည်အခွံသည် ပါးပြီး ကတော့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော နံရိုးနုငယ်လေးများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ သစ်သီး၏ အသားပိုင်းသည် အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး အရည်ပါဝင်မူနူန်းများသည် နှစ်လိုဖွယ်အရသာရှိပြီး အထဲရှိအမဲရောင်အစေ့ကို စားလို့မရပါ။ ဒူးရင်းဩဇာတွင် အစေ့နည်းပါးသောအသီးမှာ ရှားပါးလှသည်။အရသာရှိရုံမက ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းလှပါသည်။ အစာအိမ်ရောဂါ အစရှိသောရောဂါမှ အူထဲရှိ ကပ်ပါးပိုးအထိ ရောဂါပိုး အမျိးမျိုး ကုသရာတွင် ဆေးဖက်ဝင်သည်။အစေ့သည် အန်တာပျောက်စေသော ဂုဏ်သတ္တိရှိပါသည်။ အရွက်၏ အရည်သည် ခေါင်းပေါ်မှ သန်းများကို ဖယ်ရှားပေးသည့်အပြင် ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့ကျစေသည်။ စိစိညက်ညက်ကျေအောင် ချေထားသောအရွက်များသည် ဝဲနှင်းခူ ရောဂါကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်သာမက … Read more